Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray maamulka Koonfur Galbeed. – Radio Daljir
Diseembar 6, 2016 9:45 g 0
Muqdisho, Dec 07 2016-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed oo soo dhameeystiray 69-ka da xildhibaan ee doorashooyinka Golaha Shacabka ee lagu dootay Baydhabo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in doorashooyinkii Golaha Shacabka ee ka dhacay Baydhabo ay u qabsoomeen si xasilooni iyo dimuqraadiyad ku dheehan tahay .
Madaxweynaha ayaa ammaan iyo mahad-celin u jeedinaya Madaxda Dhaqanka iyo Madaxda Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed iyo Guddiyada Hirgelinta Doorashooyina Dadban ee heer Federaal iyo heer Dowlad Gobolleed oo guulo ka gaaray doorashooyinka loo qondeeyey ee Golaha Shacabka islamarkana noqday Dowlad Gobolleedkii Labaad ee dhameystira doorashooyinka Golaha Shacabka.
Madaweynaha, wuxuu ugu baaqayaa Guddiyada Dorashooyinka Dadban iyo Dowlad Gobolleedyada harsan in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo dhameystiro doorashooyinka Golaha Shacabka iyada oo la ilaalinayo nidaamka sharci ee u degsan doorashooyinka.
DHEGEYSO-Xoolaha Puntland oo la gaarsiinayo gurmad caaafimaad.